आर्थिक सहयोग | पेनी: पेन्सिल्भेनियालीहरूलाई स्वास्थ्य कवरेजसित जोड्ने
तपाईंलाई चाहिएको आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नुहोस्!
के तपाईंलाई १० मध्ये ९ जना लेनी ™ ग्राहकहरू आर्थिक सहयोगको लागि योग्य छन् भनेर थाह थियो?
पेनीको आर्थिक सहयोगले कसरी काम गर्छ, हेर्नुहोस्। भर इन एस्पानोल ।
उपयोगी आर्थिक सहायता आधारभूत कुराहरू
यदि तपाईं वित्तीय सहायताको लागि योग्य हुनुहुन्छ भने, पेनीले तपाईंलाई स्वास्थ्य बिमा र हेरचाहको लागि तिर्ने रकम कम गर्ने दुई प्रकारहरूसँग जोड्न खुसी छिन्: एउटा उन्नत प्रीमियम कर क्रेडिट (APTC) र लागत साझेदारी कटौती (CSR)।
उन्नत प्रिमियम कर क्रेडिट के हो?
उन्नत प्रीमियम कर क्रेडिट (APTC) एउटा कर क्रेडिट हो जसले तपाईंको प्रीमियम वा मासिक स्वास्थ्य बिमा भुक्तानी कम गर्छ। पेनीमार्फत आवश् यकता पूरा गर्न आवेदन दिनुहुँदा तपाईंले यस वर्षको लागि आफूले आशा गरेको आम्दानी अनुमान गर्नुहुनेछ । यदि तपाईं APTC को लागि योग्य हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो मासिक भुक्तानी कम गर्न क्रेडिटको कुनै पनि रकम पहिल्यै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
APTCs का बारेमा बढी सिक्नुहोस् ।
मेरो आशा गरिएको घरायसी आम्दानी के हो?
अनि आफूले आशा गरेजस्तो छाँटकाँट गरेर त्यसलाई अद्यावधिक गर्नुहोस् । आवश् यक होस् या नहोस् , आफ्नो परिवारका सबै मानिसहरू र आश्रितहरूलाई समावेश गर्नुहोस् ।
आफ्नो आय कसरी अनुमान गर्ने भन्नेबारे अझ बढी सिक्नुहोस्।
लागत बाँडफाँड मा कमी के हो ?
लागत-साझेदारी कटौती (CSR) कटौती र copayments जस्तै आफ्नो जेब बाहिर लागत कम गर्न मदत गर्छ। यदि तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने थप बचत प्राप्त गर्न तपाईंले सिल्भर श्रेणीमा एउटा योजना बनाउनुपर्छ।
CSRs को बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
आर्थिक मदतको लागि योग्य छु कि छैन भनेर म कसरी पत्ता लगाउन सक्छु?
तपाईं आर्थिक सहयोग पाउन योग्य हुनुहुन्छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन तपाईंको परिवारको साइज र वार्षिक आय प्रयोग गरिनेछ। तपाईंको परिस्थितिको आधारमा, यो दुवै APTCs र CSRs लागि योग्य हुन सम्भव छ.
हालै पारित अमेरिकन रेस्क्यु प्लानमा बजारको स्वास्थ्य कवरेज खोज्ने र पेनीमार्फत भर्ना भइसकेकाहरूको लागि पेन्सिलभेनियावासीहरूले निकै बचत गर्ने अद्यावधिकहरू समावेश छन्।
तपाईँको बचत गणना गर्नुहोस्
के मदतको लागि प्रश् नहरू छन् ?
उपलब्ध आर्थिक सहयोग र तपाईं र तपाईंको आवश्यकताको लागि सही स्वास्थ्य बिमा कसरी रोज्ने भन्ने बारे प्रश्नहरूको जवाफ पत्ता लगाउनुहोस्।
पसल FAQ तिर हेड